Ahoana ny famahana ny olan'ny faharetan'ny fampidinana ny App Store | Vaovao IPhone
Ny App Store no tena loharanon'ny fitaovantsika, hany ka afaka manao kely na saika tsy misy na inona na inona izahay raha tsy misy ny fampiharana nomen'izy ireo anay, satria ny ankamaroan'ny olona izay efa napetraka mialoha ny fitaovana dia matetika tsy dia be loatra. fampiasana. Na izany aza, izay rehetra manjelanjelatra ao amin'ny iOS App Store dia tsy volamena, matetika isika dia manana olana amin'ny fisintomana ireo rindranasa satria miadana loatra izy ireo ary miafara amin'ny famoahana antsika amin'ny tanana. Izany no antony anomezanay hevitra anao anio hamahana olana amin'ny fisintomana ao amin'ny iOS App Store, amin'ny fomba mora indrindra sy haingana indrindra.
Ny fisintomana miadana ao amin'ny iOS App Store dia mety vokatry ny olana maro samihafa, noho izany dia hanangona ny sasany amin'ireo fepetra mahazatra indrindra hamahana ireo olana ireo izahay. Betsaka no toa lojika aminao ary efa fantatrao izany, fa ny fahatsorana kosa dia mitoetra amin'ny fandehanan'ny zavatra. Zava-dehibe ny fiheverantsika ny anton-javatra rehetra, Amin'ny ankapobeny, ny olana amin'ny fisintomana dia mety hitranga noho ny hadisoan'ny router, ny olan'ny fifandraisana, ny fianjeran'ny mpizara iOS App Store na koa noho ny olan'ny rindrambaiko izay misy ny kinova iOS ankehitriny, ka andao isika.
1 Hamarino raha an-tserasera ny lohamilin'i Apple
2 Atsaharo indray ny fitaovana
3 Atsaharo ary ampifandraiso indray ny kaonty iTunes anao
4 Atsaharo ny router
Hamarino raha an-tserasera ny lohamilin'i Apple
Araka ny efa nolazainay, imbetsaka ny servera no midina tanteraka, matetika i Apple no menatra an'io olana io, na izany aza raha miditra amin'io isika LINK azontsika atao ny manamarina ny satan'ireo mpizara mivantana amin'ny serivisy rehetra omen'ny orinasa Cupertino ny mpanjifany. Ny olana dia ny filazan'izy ireo fa io dia ao anatin'ny henjana indrindra amin'ireo mivantana, saingy efa betsaka ny latsaka ny App Store manerantany, eny fa na dia ny Apple Music aza, ary tsy afaka nandinika azy io tamin'ny pejy momba izany izahay. Raha fintinina, ny dingana voalohany hitehirizana fotoana dia ny manamarina fa miasa ny iOS App Store. Twitter dia mety ho fomba iray hafa mora foana hijerena raha mandeha tsara ny iOS App Store.
Atsaharo indray ny fitaovana
Teny farany amin'ny teknolojia sy ny elektronika izay tsy i Apple akory no mahavonjy ny tenany. Marina izany, satria saika misy ny fitaovana mety manjaka rehetra, ny iPhone-nao koa mendrika ny famerenana isaky ny mandeha. Mba hamerenana iPhone dia matetika no tsindrio mandritra ny fotoana maharitra ny bokotra Home sy ny bokotra Power mandra-pisehoan'ny logo an'ny orinasa avy any Cupertino. Na izany aza, tamin'ny fahatongavan'ilay iPhone 7 sy ny bokotra Home manokana dia nanova ny fomba famerenana izahay. Ka raha manana iPhone 7 na fitaovana avo kokoa ianao dia tsy maintsy mampiasa ny bokotra Home + Volume mitambatra- raha toa ka tianao ny hamerina ilay fitaovana. Toy izany koa, tsy mila miandry ianao mandra-pisehoan'ny sary famantarana ny paoma ary andramo indray ny fampidinana anao ao amin'ny iOS App Store.
Atsaharo ary ampifandraiso indray ny kaonty iTunes anao
Ity dia iray amin'ireo fepetra tsotra fa azo ampiasaina, matetika dia manana serivisy ao anaty lozika isika, noho izany mila miala sy mampifandray ny kaonty iTunes-tsika. Ho an'ity dia handeha ho any isika Fikirana> iTunes Store sy App Store ary kitiho ny lohateny manga izay miseho eo an-tampony, izay manondro ny Apple ID mifandraika amin'ity karazana serivisy ity.
Rehefa manindry izahay dia hiseho ireo andiana safidy ao anaty menio mipoitra: Jereo ny Apple ID; Misorata anarana, iForgot ary esory. Mazava ho azy fa ny iray mahaliana antsika dia ny «session akaiky». Miditra indray izahay izao ary mizaha ny alaina.
Indraindray ny router no mahatonga azy, satria tsy nahomby koa ity. Izany no antony amporisihanay anao ho toy ny fepetra farany handehananao any amin'ny router anao am-perinasa. Saika azo antoka fa ao ambadika dia hanana bokotra antsoina hoe "Reset" ianao na tsindrio fotsiny ilay switch Power. Raha miafina ny bokotra "Reset" ary tsy azo idirana afa-tsy amin'ny paompify dia ampiasao ho safidy farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ahoana ny famahana ny olan'ny faharetan'ny fampidinana ny App Store
Hadalana inona. Ka ny vahaolana amin'ny fisintomana an'i Apple dia ireo avy amin'ny AppStore sy Apple Music (izay somary miadana ihany koa) dia avy amin'ny fitaovantsika…. Dia mimenomenona izahay rehefa miteny aminay foana ireo orinasan-telefaona hoe "avereno ny router", izay ny nataonao tamin'ny ankapobeny.
Inona ny hadalana atao, miasa ratsy izy satria ratsy ny asany, hanana sivana izy ireo, efa niasa ratsy tamin'ny ankamaroan'ny mpandraharaha, na dia ny fanavaozana mac aza, ny fivarotana app dia mandeha amin'ny ampondra, fifandraisana fibre Movistar, miaraka amin'izy rehetra, ny tsy azo atao dia ny gigabytes 5 Naharitra 8 ora ny fanavaozana ny xcode, fa raha ataonao amin'ny fifandraisana amin'ny iphone dia mitaky koma aotra ianao, fisalasalana izany ary efa niasa ratsy nandritra ny taona maro ary tsy mamaha izany izy ireo, zavatra ananan'ny mpizara azy miaraka amin'ireo orinasa fa tsy hiteny izy ireo.